Hetsika eny amin’ ny kianjan’ny 13 mey : hivory ny depiote ho an’ny fanovana, anio | NewsMada
Hetsika eny amin’ ny kianjan’ny 13 mey : hivory ny depiote ho an’ny fanovana, anio
Mazava ny lahateny nifandimbiasana tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, omaly manolona ny momba ny fanendrena praiminisitra na ireo minisitra handrafitra ny governemanta. Hivory ary hiroso haka fanapahan-kevitra izy ireo anio. Mitohy ny tolona .
Hatramin’ny ora niafaran’ny hetsika tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, omaly, tsy mbola nahalala ny fanendrena ny Praiminisitra vaovao, i Ntsay Christian ireo vahoaka sy ny sasany amin’ny mpitarika. Nanitrikitrika izy ireo tamin’izany. “ Miantso antsika vahoaka ho tonga maro rahampitso (anio). Hivory izahay ary haka fanapahan-kevitra raha tsy mbola manendry ny praiminisitra hatramin’ny rahampitso (anio) ny filoham-pirenena… Nisy hetahetan’ny vahoaka teto ho amin’ny fanovana sy hiady amin’ny kolikoly. Nisy fatiolona sy ra nandrika. Antony nijoroantsika eto avokoa izany. Manana ny ampy isika raha praiminisitra sy minisitra izany… ”, hoy izy ireo.
Mafy ny tsindry samihafa any ambony any
Nohitsin’izy ireo fa tena mafy ny tsindry nahazo azy ireo tato anatin’ny andro vitsy. Anisan’ny nokianin’izy ireo koa ny fianakaviambe iraisam-pirenena fa anisan’ny ao ambadika amin’izao raharaha izao. Naman’ny namono ny vahoaka isika raha olon-kafa tsy ho an’ny fanovana ny eo, araka ny lahateny ihany. “Tsy resaka seza ny anay fa fanovana ny hahatsara kokoa ny fiainan’ny vahoaka. Ny fomba fanaovana politika ary koa ny fiadiana amin’ny kolikoly” , hoy ihany izy ireo.
Hitondra valin-kafatra ny depiote sy ny vahoakan’ny 13 mey
Nanterin’izy ireo koa fa nanaraka ny lalàna hatrany izy ireo ary tsy nandika na nihoa-pefy tamin’ny hetsika rehetra sy ny dingana natao. Samy nanamafy izany lahateny izany avokoa ireo rehetra nandaha-teny. Anisan’izany ireo sendikà samihafa toy ny mpampianatra, ny avy amin’ny Jirama sy ny hafa koa. Takin’izy ireo fa tokony ho olon’ny tolona na koa avy amin’ny depioten’ny fanovana ireo hisahana ny fitantanana ny firenena. Tsy avy amin’ny HVM mihitsy.
Araka izany, andrasana, anio, ny ho tohin’ny hetsika na koa ny valin-kafatra avy eny an-kianja manoloana ny fanendrena ny Praiminisitra Ntsay Christian.